Mayelana NATHI | Jiangsu SINGNUO Chemical Technology Co., Ltd.
Abaxhumanisi be-Agrochemical / Pharmaceutical
Uchungechunge lweMethyl Benzoic Acid
Uchungechunge lweMethylbenzoyl Chloride
Uchungechunge lwe-Nitrobenzoic Acid
Amakhemikhali Ayingozi Nokususwayo
I-DEET / N, N-Diethyl-3-Methylbenzamide
I-Jiangsu SINGNUO Chemical Technology Co., Ltd. itholakala eSuzhou, eChina. Singabantu ibhizinisi eligxile ekuthumeleni i-DEET, i-glyphosate, imithi kanye ne-pesticide intermediates, i-methyl benzoic acid, i-nitrobenzoic acid nemikhiqizo yayo. I-SINGNUO Chemical inamalungelo okuzimela okuthekelisa, kanye nethimba lokusebenza ngobungcweti, elinokusebenza emazweni angaphezu kwama-50. Ngamakhono wokuhola ahamba phambili, ikhwalithi yomkhiqizo omuhle kakhulu, kanye nensizakalo ephelele futhi ecabangayo, sizuze izimakethe eNyakatho naseNingizimu Melika, eningizimu-mpumalanga ye-Asia, eMpumalanga Yurophu nase-Afrika.
I-SINGNUO Chemical inesitshalo sayo sokukhiqiza, i-Anhui Jiangtai New Material Technology, esidlule i-ISO19001: isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-2015, ifakwe ithimba eliphezulu le-R & D nobuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukile ngohlelo lokulawula oluzenzakalelayo ngokuphelele. nokusetshenziswa kwempahla eluhlaza. Izindawo zokugcina ezinabanikazi zingagcina ukuthengwa kwempahla okwanele, ukuze kugcinwe ukuqina kwentengo lapho amanani ehla enyuka kuyo yonke imboni, futhi kugcinwe inzuzo ethile emncintiswaneni wemakethe.
Esebenza emazweni angaphezu kwama-50.
Ukukhiqiza kufinyelela kumathani ayi-17,000 / ngonyaka.
Ukutshalwa kwemali okuphelele kwephrojekthi yizigidi ezingama-360 yuan.
Amafektri nezindawo zokugcina izimpahla
Ukuba nezimboni zayo kanye nezindawo zokugcina impahla, ikwazi ukugcina ukutholakala kwempahla okwanele, ukuze kugcinwe ukuqina kwentengo lapho intengo yemboni yehla, futhi igcine inzuzo emncintiswaneni wezimakethe.
Umsebenzi wokusebenza weqembu
Ithimba lokusebenza kochwepheshe, lawula ngokuqinile ukukhethwa, ukulawulwa kwekhwalithi, ukuphathwa kwempahla nezinye izici.
Konke ukufakwa komkhiqizo kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Le nkampani ibambisana namanyuvesi amaningi ukuthola izinzuzo ezihambisanayo, futhi isebenzisa ukukhiqizwa okuvela ezintweni ezingavuthiwe kuya emikhiqizweni yokugcina ukuqinisekisa inzuzo ephezulu yemikhiqizo.
Amahora angama-24 aku-inthanethi
Ikheli: Cha 608, block A, World Trade Center, Isifunda saseGusu, iSuzhou City, Isifundazwe saseJiangsu
O-Toluoyl Chloride, I-2-Methyl-3-Nitrobenzoic Acid, I-Potassium Sulfate, I-N, N-Diethyl-3-Methylbenzamide, I-2-Methylbenzoic Acid, I-2-Methyl-4-Nitrobenzoic Acid,